ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်တွင်းမှာ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်း ပြောင်းလဲမှုက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေကို စိတ်ခံစားမှု မကောင်းတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်များတာ၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ သိချင်ရင် ဆောင်းပါးလေးကို အတူတူ ဖတ်ကြည့်ရအောင်လား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့ ဘာတွေ စားမလဲ………….
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ အနေနဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေ စားပေးပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ omega-3 ပါတဲ့ ငါးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မက်ကာရယ်၊ ဆယ်လ်မွန် စတဲ့ ငါးတွေက စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက ဒီငါးတွေက မာကျူရီ ပါဝင်မှု မြင့်တက်တာပါ။ မာကျူရီများတာက ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတွေ အနေနဲ့ အများကြီး စားဖို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်လောက်ပဲ စားပေးပါ။
အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းနုနွယ်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် ပါဝင်နေတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟင်းနုနွယ်မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ပါဝင်နေတာက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကလည်း စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။
Brazil nuts၊ သစ်ကြားသီး၊ အယ်လ်မွန်စေ့လိုမျိုး အခွံမာသီးတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ နဲ့ စိုးရိမ်စိတ်များတာလိုမျိုး စိတ်အခြေအနေတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သတ္တုဓာတ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ selenium ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒီအခွံမာသီးတွေကို စားပေးမယ်ဆိုရင် မေမေအနေနဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေမှာပါ။
အနက်ရောင်ချောကလက် တစ်တုံး ကနေ ၃ တုံးလောက်အထိစားပေးတာက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ဖို့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်မှာ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် အနက်ရောင် ချောကလက် စားပေးပါ။
ပဲနီလေးက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ သံဓာတ် ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကလည်း ခန္ဓာကိုယကို အင်အားပြည့်ဝစေပြီး စိတ်ပင်ပန်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ ဗီတာမင် B6 နဲ့ tryptophan တို့လိုမျိုး ပျော်ရွှင်ခြင်း ဟော်မုန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို သက်သာစေပြီး ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေသလို စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေပါတယ်။
Smile, You’re Pregnant!7Delicious Ingredients To Boost Your Mood During Pregnancy https://www.motherandbaby.co.uk/family-life/food/smile-you-re-pregnant-7-delicious-ingredients-to-boost-your-mood-during-pregnancy?utm_source=Bibblio-related-box5&utm_campaign=MAB-BIB-AFF Accessed Date 20 August 2020